Nobody reviewed this site yet, be the first to tell everyone what you like about myanmarexpress.net.
BETA We evaluate the latest social media signals (about myanmarexpress.net)from Twitter, Facebook and Google+ to get an idea about the public opinion.
Facebook Share: 1733
Ko Thiha | Oct 14, 2013 - 14:41
ဒီမိုကရေစီ နှင့် အကြမ်းဖက်မှု Khine Zaw | Dec 18, 2011 - 14:38
ရန်ကုန်မြို့မှာ ဂျပန်နိုင်ငံလုပ်ငန်း ခုံးတံတားလေးစင်းကို ရင်... moenat tharlay | Mar 23, 2012 - 15:10
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနာမည်ဖျက်နေတဲ့ Khine Zaw | Dec 12, 2011 - 14:19
ထက်ရာဇာ Khine Zaw | Dec 12, 2011 - 14:21
ယမကာ လေးသောက်လိုက်၊ Facebook မှာ ဆဲလိုက်၊ Skype မှာ မဖွယ်မရာလုပ်လိုက်နဲ့ အချိန်ကုန်နေသော ၈၈ မျိုး... moenat tharlay | Mar 23, 2012 - 15:12
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနာမည်ဖျက်နေတဲ့ နေ လင်း | Aug 05, 2013 - 11:41
2.bp.blogspot.com/-_BzqVcNoX8A/UXeK-5d8AHI/AAAAAAAAyoQ/5coanpCGGiQ/s1600/ moenat tharlay | May 11, 2012 - 11:09
Baydar Zaw ရှစ်လုံးကိစ္စကို MYANMAR EXPRESS ရဲ့ အမြင်လေး ဖတ်ကြည့်လိုက်ကြရအောင် ဒုတိယသမ္မတသီဟသူရ ဦး... Khine Zaw | Dec 12, 2011 - 14:20
ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်းကြောင့် မိုက်နေတာများလား?? Facebook Buzz
Wai Lay | Feb 25, 2014 - 01:13
ထူးမှထူးရော ရီးစားအငှားလိုက်ရတယ်လို့ပဲ Nay Thwae | Feb 19, 2014 - 15:40
စစ်ဘက်ကတော့ မြန်မာ အက်ပရက်စ် Myanmarexpress က ဒေါ်စုပုံတွေကို ညစ်ညမ်းပုံ လုပ်တဲ့ အထိ အောက်တန်းကြတယ် သူကြီး မင်းစိုး | Feb 15, 2014 - 14:59
လေးစားစွာဖြင့် (myanmarexpress) Marya Kovsky | Jan 13, 2014 - 19:56
ဒေါ်စု သမ္မတ ဖြစ်ရေးမှာ စစ်ခွေး စစ်ဖိနပ်ဆွဲတဲ့ MYANMAREXPRESS က ငါလုပ်မှဖြစ်မယ်ဆိုတာလောကမှာမရှိပါ။ ငါမလုပ်လဲလောကကြီးကဖြစ်ချင်တာ ... Phyo Zin | Jan 07, 2014 - 17:23
သခင်အားရ ခွေးပါးဝနေတဲ့ Myanmarexpress ကကောင်တွေတော့ သူ့ အဘကိုထိလို့ ပြန်ဟောင်နေပြီဟ Htay Aung | Jan 01, 2014 - 04:01
myanmarExpress ဟာNLD မ ကောင်းကြောင်းအမေစုမကောင်း ကြောင်းဝေဖန်တိုက်ခိုက်ပြီးတော် တော့ကိုမဟုတ်တာတွေရေးနေပါလား မီဒီယာကျင့်ဝတ်နဲ့မညီဘူးလို့ထင် တယ်သိခ္တာရှိရှိရေးပါ ... Golden Brothers | Jul 11, 2013 - 06:07
Myanmar Express တွင် ဖော်ပြထားသော သတင်းသည် လိုင်ဇာမြို့ တွင် တပ်မတော်မှ ပစ်ခတ်သော လက်နက်ကြီးကျည် ကျရောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရေးသားခဲ့သော သတင်းအပေါ်မူတည်၍ Eleven Media Group ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ ထိခိုက်အောင် ပုတ်ခတ်စွပ်စွဲမှု များစွာဖြင့် ရေး သားထားခြင်း1 ... Min Moe | May 07, 2013 - 16:25
Myanmarexpress.net ရေခင်ဗျားသတင်းတွေကသိပ်နောက်ကျနေတယ်၊ စီစစ်ရေးမှာကြာနေသလားတော့မပြောတတ်ဘူး၊ BBC,VOA,RFA,DVB တွေကခင်ဗျားထက်သတင်းဦးတယ်၊ ဒါလေးသုံးသပ်ဖို့လိုနေပြီထင်တယ် ... Micheal Elezent | May 04, 2013 - 10:44
လူသိများသော ၀က်ဆိုက်တခုမှာ Myanmarexpress.net ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ် အကျယ်ချိန်မှ လွတ်မြောက်လာသည်နှင့် မရှေးမနှောင်းမှာ တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုဝက်ဆိုက်အား စတင် ဖန်တီးခဲ့ချိန်မှစ၍ အကြိမ်ရေ ၂၂သန်းကျော်1 ... Чжо Зин Аунг | May 03, 2013 - 04:09
လူသိများသော ၀က်ဆိုက်တခုမှာ Myanmarexpress.net ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ် အကျယ်ချိန်မှ လွတ်မြောက်လာသည်နှင့် မရှေးမနှောင်းမှာ တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရုရှားနိုင်ငံ မော်စကိုမြို့တွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော ထိုဝက်ဆိုက်အား စတင်1 ... Ko SaiSai | Apr 30, 2013 - 07:57
လူသိများသော ၀က်ဆိုက်တခုမှာ Myanmarexpress.net ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို ၂၀၁၁ သမီး ဆိုး | Apr 08, 2013 - 05:26
Myanmarexpress.net မှ ရေးသားချက်။။ (သမီုးဇီး) တည်းခိုခန်းလည်း လိုက်မအိပ်ဘူး Mtt Moht | Mar 07, 2013 - 06:47
ရယူ၍ထွက်ခွာသည့် စနစ်ကို ၁၉၅၈ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ ၁ ရက် နေ့တွင် စတင်ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ Source: myanmarexpress.net Mgchitthuko Ko | Feb 12, 2013 - 04:53
myanmarexpress.netဒီလင့်ကနေလူတစ်ဖက်သားကိုတိုက်ခိုက်နေပါသည်။ ကပ္ပတိန် အညတရ ငှက်ခါး | Feb 04, 2013 - 08:46
မြန်မာအိခ်ပရက်ဆိုဒ်တန်ဖိုး ဒေါ်လာ လေးသောင်းငါးထောင် တောင်တန်သတဲ့ Swe Than | Jan 05, 2013 - 16:55
myanmarexpress.net ????????????????????????????????????????????????????????????? Sanlwin Oo | Jan 16, 2013 - 18:03
Myanmar Express တွင် ဖော်ပြထားသော သတင်းသည် လိုင်ဇာမြို့တွင် တပ်မတော်မှ ပစ်ခတ်သော လက်နက်ကြီးကျည် ကျရောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရေးသားခဲ့သော သတင်းအပေါ်မူတည်၍ Eleven Media Group ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ ထိခိုက်အောင် ပုတ်ခတ်စွပ်စွဲမှု များစွာဖြင့် ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်သည်။1 ... Lawbar Tha | Jan 16, 2013 - 15:40
Myanmar Express ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားသော သတင်းသည် လိုင်ဇာမြို့တွင် တပ်မတော်မှ ပစ်ခတ်သော လက်နက်ကြီးကျည် ကျရောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရေးသားခဲ့သော သတင်းအပေါ် မူတည်၍ Eleven Media Group ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ ထိခိုက်အောင် ပုတ်ခတ်စွပ်စွဲမှုများစွာဖြင့် ရေးသားထားခြင်း1 ... General Knowledge | Jan 15, 2013 - 20:59
ထို့အပြင် EMG အား အောက်တန်းစားမီဒီယာဟု လေ့လာစောင့်ကြည့်သူ အဖြစ် မှတ်ချက်ပေးထားသော ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားက အစိုးရ၏ ၀ါဒဖြန့်ချိရေး အမည်ခံ Voice Of Myanmar ဘလော့ဂ်တွင် ရေးသားထားသည်ကို myanmarexpress.net တွင် ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ... အဂ္ဂမဟာ သီရိသုဓမ္မ ပုံပျက် ခင်စိန် | Jan 15, 2013 - 20:12
ပြောချင်ပါတယ် myanmarexpress.net က အရမ်းကြောက်တယ် သူတို့အနေနဲ့ မဟုတ်တဲ့သတင်းကို ပဲရေးတာဆိုတော့ Security Myanmar News | Jan 15, 2013 - 16:02
1 ... Herostar | Jan 15, 2013 - 09:19
The Voice Weekly ဂျာနယ်နှင့် Eleven Media တို့၏ စာမျက်နှာ များတွင်မူ ကေအိုင်အေနှင့် ပတ်သက်သော သတင်းများအား ကေအိုင်အေ အကြိုက် ရေးသား ဖော်ပြပေးမှု များကြောင့် မကျေမနပ် ပြောဆိုမှု များအား တွေ့မြင်ရ သည်။ မှတ်ချက် Comment ရေးသားသူများအား ရေးသားခွင့်1 ... May Kha | Nov 06, 2012 - 02:11
... Ashin Javana | Nov 03, 2012 - 16:18
မူလစာမျက်နှာ Myanmar Express | Nov 13, 2013 - 15:39
အမေစုကို အားကျခဲ့သူ အမေစုလိုပဲ နိုင်ငံခြားသားကို … Myo Gyi | May 09, 2013 - 05:54
အခုထိ စစ်အစိုးရကို ထောက်ခံနေတဲ့ ငနဲသား MyanmarExpress, Ko John, Oppositeye, လူထု မောင်ကာဠု တို့ကိုလဲ အမြင်မှန်ရလာအောင် သွန်တင်ပေးပါ။ ... မျိုးချစ် ကို ဖိုးတုတ်ကြီး | Feb 04, 2013 - 07:41
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန် သံအမတ်မှ ရိုဟင်ဂျာကို နေရာပေးသဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ ဗြိတိန်သံရုံးရှေ့ ဆန္ဒပြမည်- Myanmarexpress group ... Sabishii Hana | Feb 02, 2013 - 10:28
မဟုတ်တာ လုပ် ရင် .. မိအောင် ဖမ်းဘို့... လူတိုင်းမှာ တာ ဝန်ရှိပါတယ် .. Minthar Gyi | Jan 27, 2013 - 12:46
အခုတလော စိတ်တွေ ပူပန်နေတဲ့ အကြောင်းကတော့ အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ ဒေါက်တိုင်တွေ သက်ဝင်လှုပ်ရှား လာတာကိုပါ။ အာဏာရှင်စနစ်မှာ အဓိက ကျားကန်တာက လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ မဟုတ်ပါဘူး။ လျှို့ဝှက်ရဲအဖွဲ့(ထောက်လှမ်းရေး)နဲ့ ၀ါဒဖြန့်ချိရေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၀ါဒဖြန့်ချိရေးဘက်မှာ1 ... Twitter Buzz
1aungthantun | Mar 17, 2014 - 14:51
မိုးသီးဇွန်‌လုပ်‌ခဲ့တာ‌တွေ မှတ်‌တမ်း‌ကောင်း‌တွေရှိ‌နေ‌တော့ ဘယ်‌လိုမှ ငြင်းလို့မရနိုင်‌ပါဘူး sithuhmuewai | Mar 16, 2014 - 03:52
မြို့ပတ်အထူးတွဲပေါ်မှ စုံတွဲအချို့၏ မဖွယ်မရာသတင်း ~ Myanmar Express 1aungthantun | Jan 16, 2014 - 10:13
အစိုးရရဲ့ ခိုင်‌မာတဲ့ ရပ်‌တည်‌ချက်‌ကို ‌လေးစားပါတယ်‌ 1aungthantun | Jan 16, 2014 - 09:54
တုတ်‌ယူမလား ဓားယူမလား ‌ခိခိ 1aungthantun | Jan 16, 2014 - 09:52
ရှေ့နေကြီးဦးကိုနီသည် ယခုအခါ NLD အတိုင်ပင်ခံများ ဖြစ်ကြသော ဦးတင်ဦး၊ ဦးဝင်းတင်တို့နှင့် တစ်တန်းတည်းထားကာ... HeInLaY12 | Jan 14, 2014 - 10:53
ပုံတစ်ပုံက ပေးစွမ်းနိုင်သော စကားလုံးများ ~ Myanmar Express: 1aungthantun | Jan 11, 2014 - 05:08
ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ သီလဂုဏ်၊ သမာဓိဂုဏ်နဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ဆရာတော်တွေကို... 1aungthantun | Jan 10, 2014 - 18:56
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း (၇၀)ကျော် က မျိုးစောင့်ဥပဒေ ပြဌာန်းရေးဗိုလ်ချုပ်ပါဝင်ခဲ့ ~ Myanmar Express 1aungthantun | Jan 10, 2014 - 08:04
မင်းသမီးနှင့်‌ လူကြမ်းတသိုက်‌ ReadyMiley | Feb 23, 2014 - 08:46
ဒီတစ်ပတ်အတွင်း ကျွန်တော်တို့ နားထောင်ခဲ့ရသမျှ remix သီချင်းတွေထဲမှ အထူးဆန်းဆုံးကတော့… MyatMs | Feb 22, 2014 - 15:36
ဒါရိုက်တာဘဝသို့ ကူးပြောင်းရန် ကြံစည်နေသည့် ကိတ်မော့စ် MyatMs | Feb 22, 2014 - 15:29
ဆွဲအားမဲ့ လေဟာနယ်ထဲ ရောက်သွားသည့် ကိတ်အပ်တန် 1aungthantun | Feb 21, 2014 - 10:12
ပြသနာပဲ mrchitone29 | Feb 18, 2014 - 08:03
Myanmar Express: ကားပြပွဲ တွေ မှာ အကုန်ချွတ်တဲ့ မော်ဒယ် တွေ ကို တရုတ် နှိပ် ကွပ်: 1aungthantun | Feb 18, 2014 - 06:02
"မောင်သွေးသစ် ဆိုတဲ့ သူ၊ ကန်တော့ပွဲနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဝိဥာဉ်ခေါ် တယ် ဆိုပြီး ခပ်တည်တည်နဲ့ လုပ်တယ်။ ပြီးတော့... ahsan_jehangirk | Mar 16, 2013 - 06:52
@Aungaungsittwe ShweMaung_MP | Mar 14, 2013 - 03:23
NLD ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဆုံးဖြတ်ချက် ဘဝင်မကျ ကြောင်း ၈၈ မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင် ကိုမြအေး ပြောကြား ~ Myanmar Express photob3u2 | Mar 10, 2013 - 09:02
@111OOO11O1O11 junta, web site TheVoiceOnNBC | Mar 09, 2013 - 17:11
Thetminn Oo : The Voice Weekly Journal ဒီကိစ္စအတွက် သင့်တာဝန်က တောင်းပန်ရုံဘဲလား ။ ကလေးတွေရဲ့… minkoko30 | Mar 01, 2013 - 14:22
သေးလွန်းတဲ့ ပစ္စည်းကြောင့် ၉ နှစ်အရွယ်သားကို စေတနာဖြင့် သတ်သော အင်ဒို မိခင် ShweMaung_MP | Feb 13, 2013 - 12:30
ပြည်ခိုင်ဖြိုး သတင်းစာထုတ်ရန် ၉၀ ရာနှုန်း အသင့်ဖြစ်နေပြီ ~ Myanmar Express AndroidTrojan | Feb 13, 2013 - 00:03
From : : .co/lTeFwnoe WaiHinZaw | Dec 18, 2012 - 10:53
မလွယ်ဘူး ... About myanmarexpress.net
Status of myanmarexpress.net
Last checked on Apr 22, 2014 - 15:47 Website Ping Test: myanmarexpress.net down?
© Webutation 2014 - myanmarexpress.net